Ma dooneysaa in aad u hagaagsan iCloud qalabka Android? Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida aad u hagaagsan xiriirada, fariimaha qoraalka ah, videos, sawiro, files audio iyo Guda call ka iCloud in Android. Read More >>
Waxaan qoraal karaa iPad? Sure, ayaa waxaa jira siyaabo kala duwan oo ay u diraan farriimaha qoraalka ah ka iPad. Fiiri xal u diro fariimaha qoraalka ah ee iPad. Read More >>
Ma doonaysaa in ay u tirtiri Android phone ama kiniin ah si joogto ah si aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah? Here're 4 siyaabood oo aad aad ka soo caawiyaan. Read More >>
Waa quruxsan fudud in ay nadiifiso taariikhda dhirta aad iPhone, gaar ahaan cad Safari taariikhda ku iPhone. Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa hab cusub oo si buuxda u cad Safari taariikhda ku iPhone. Read More >>
Maqaalkani waxa uu muujinayaa inaad hogaanka 15-ada ee macruufka 8. Haddii aad u cusboonaynta in macruufka 8, waxaad halkan u timid karo oo ay helaan barnaamijyadooda aad ugu jeceshahay. Read More >>
Xusuusta Clear iPhone:. Haddii aad iPhone si buuxda, taasoo ka dhigeysa aad kaydinta jirin, isku day in aad sida ugu fudud, oo sahlan oo wax ku ool ah in ay nadiifiso xasuusta on iPhone Read More >>
Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida aad u joogto ah tirtirto taariikhda ugu baaqayaan aad iPhone la SafeEraser Wondershare -. Qalab la technology heerka military si ay u dumiyaan xog ku saabsan iPhone Read More >>
Ha ogaadaan sida ay u joogto ah tirtirto sawiro ka iPhone? Wondershare SafeEraser hubisaa in aad tirtirto oo aad sawirrada aan loo baahnayn ku iPhone si joogto ah. Read More >>
Maqaalkani waxa uu ku taxan sare toban ciyaartoy DVD ugu wanaagsan ee Windows 8 leh qaababka ugu muhiimsan ee loogu talagalay dadka si ay u soo qaado ciyaaryahanka ku haboon. Read More >>